छुरा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरे श्रीमानले ! – Namaste Dainik
September 4, 2020 September 4, 2020 NamastedainikLeaveaComment on छुरा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरे श्रीमानले !
यता, धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–१३ खल्चेत बस्ने २६ वर्षीय राजु परियारलाई सोही ठाउँ बस्ने ६४ वर्षीय सोम बहादुर गुरुङको हत्या गरेको अभियोगमा बिहीबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वादविवादको क्रममा राजुले गुरुङलाई धारिलो हतियार खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरे पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ गई आफैले हत्या गरेको बताएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।